28 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 302 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, Spider-Man, ပင့်ကူလူသား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုZombie Hunter Spidey သည်ပထမထဲသို့ဝင်သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား အမျိုးအစားတူဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဇာတ်ကောင်ကဘယ်သူလဲ။
71031 Marvel စတူဒီယို ဇာတ်ကြောင်းမှအထင်ရှားဆုံးနှင့်မှတ်မိနိုင်သောလူစွမ်းကောင်းအချို့ကိုသရုပ်ဖော်သည် Marvel Cinematic Universe၊ ဒါပေမယ့် minifigure အသစ် Spider-Man web slinger ၏ဗားရှင်းအများစုထက်အနည်းငယ်ပိုမှောင်သောအချိန်ဇယားမှဖြစ်ဟန်တူပြီး Doctor Strange ၏နှစ်သက်ဖွယ်ဝတ်ရုံကို ၀ တ်ထားပုံရသည်။
Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? streaming စီးရီးသည် MCU ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြန်လည်ဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သော်လည်းဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးတွင်အဓိကလှည့်ကွက်တစ်ခုနှင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအကျွမ်းတဝင်ရှိသော Wakandan သည်နတ်မင်းကြီးတရားမ ၀ င် Star-Lord (သို့) E ၏အခန်းကဏ္ကိုယူသည်ဟုဆိုလိုသည်arth ၏အကျော်ကြားဆုံးသူရဲကောင်းများသည်မည်သည့်အခါကမှစုဝေးမလာခဲ့ပေ။
လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှအခြားအဖြစ်မှန်တစ်ခုတွင် Doctor Strange သည်သူ၏အထင်ကရခေါင်းလောင်းမပါဘဲထွက်ခွာသွားသည်ကိုမြင်ရသည်။ ဖုတ်ကောင်နှင့်ပတ်သက်သော minifigures အတွဲတစ်တွဲအဖြစ် 71031 Marvel စတူဒီယိုZombie Hunter Spidey သည် Zombie Captain America အတွက်ဒုက္ခပေးခဲ့သည်။
လာမည့်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? ဒီကနေလှုံ့ဆော်မှုယူလိမ့်မယ် Marvel Zombies များသည်ကာတွန်းများကိုပြေးသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွင်အင်အားကြီးသူရဲကောင်းများသည်သေစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်သို့ကျရောက်သည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့ကို undead ၏ ဦး နှောက်ရှာဖွေသောအေးဂျင့်များအဖြစ်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီး The Walking Dead ဖန်တီးသူ Robert Kirkman ရေးသားခဲ့သည်။ ဖုတ်ကောင်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပုံမှန်ပျံသန်းမှုများကဲ့သို့အချို့သောသူရဲကောင်းများသည်ရှင်သန်။ ဤရုန်းရင်းဆန်ခတ်အဖြစ်မှန်၌အသက်ရှင်ရန်ကြိုးစားရမည်။
နှင့် Marvel Cinematic Universe သည်ဤဇာတ်လမ်းကိုလက်ခံ။ franchise တွင်ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်သေချာသည်။ အနည်းဆုံးဤအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည် Spider-Man Doctor Strange's Cloak of Levitation ကိုရယူဖို့စီမံတာကအပိုင်းသစ်အတွက်မဟုတ်ဘဲအဟောင်းထည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ.
Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? ၎င်းတွင်ဖန်တီးမှုအရှိဆုံးကြိုးပမ်းမှုအချို့ကိုခွင့်ပြုသည် Marvel Cinematic Universe သည်ဇာတ်လမ်းအားလုံး၌ဇာတ်ကြောင်းကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျယ်ပြန့်သောဘက်စုံတွင်ပါ ၀ င်နေသောကြောင့်၎င်းအပေါ်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျှမလိုအပ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Zombie Hunter Spidey ၏ minifigure သည် web slinger ကိုတိကျမှန်ကန်သောကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
ဘေးတိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လက်မောင်းအသေးစိတ်ခြင်းနှင့်ပုံစံခွက်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ဖြင့် Spider-Man in 71031 Marvel စတူဒီယို ၎င်းသည်ယနေ့အထိသူရဲကောင်း၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ ဇာတ်ကောင်တိုင်း၏လက်မကိုဘတ်ဂျက်သာရှိသောကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ငါတို့မှာတစ်ခုရှိတယ် အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ် Zombie Hunter Spidey တွင်သင်မျှော်လင့်ထားသောအရာကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်စီးရီးတစ်ခုလုံး၏။
Zombie Hunter Spidey ၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူ (သို့) minifigures များထဲမှမည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံရမည်ကိုအကြံဥာဏ်များအတွက် 71031 Marvel စတူဒီယို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေး In-depth ကိုလမ်းညွှန် အကွက်အပြည့်တွင်အက္ခရာများကိုဖြန့်ရန်နှင့်၎င်းတွင်တစ်ခုစီ၌မည်မျှရှိသည်။
71031 Marvel စတူဒီယို ကနေ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် LEGO.comအတွက် Lego စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစတိုးဆိုင်များနှင့်အခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုဒေသအများစု၌စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစတင်သည်။ တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်သည်နှင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပါမည်။
← LEGO Originals Wooden Minifigure ကိုတိုးချဲ့ရန်အခန်း Copenhagen
LEGO အခမဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားမှု →